“सबै त्यागेर फेरि जंगल जान तयार छु” :- प्रचण्ड
बैशाख २३- नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखाँै जनताको बीचमा काठमाडौँ आउँदा आफूलाई जंगल आएको जस्तो अनुभव भएको बताएका छन् । आइतबार कार्लमाक्र्सको २०१ जन्मस्मृति कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले जंगलमा हुँदा बरु सबै जना साथ भएको तर काठमाडौँ आउँदा जंगलमा आएको जस्तो अनुभुती भएको बताएका प्रचण्डले एकजुट हुदाँ पनि हिम्मत हारे जस्तो, केही पनि गर्न नसकिएला जस्तो महसुस भईरहेको बताए । उनले भने “उतिबेला हामीले जतिसुकै ठूला दुःखकष्ट र चुनौती बिर्सन्थ्यौं। तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ? हिजो जंगलमा सुतियो। तर, जंगलको अनुभूति भएन”।
“हामी जंगलमा भएजस्तो अनुभूति पनि भएन। तर, अहिले काठमाडौंमा लाखाँैको बीचमा हुँदा एक्लै भएको महसुस हुन थालेको छ। अहिले के विचित्र भइराखेको छ ? हामी ६/ ७ लाख कार्यकर्ता उठ्ने हो भने त हामीले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद परास्त गर्न सक्छौँ । तर, हामी हिम्मत हार्दैछौँ । किन एक्ला भएका छौँ ? हामी समूहमा भएर पनि किन कमजोर हुँदैछौँ ? हामीले संकल्प र समीक्षा गर्ने यही हो।” उनले पार्टी एकता प्रधानमन्त्री बन्न वा सत्ता कब्जा गर्न नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले पार्टी एकताको उदेश्य समाजवादमा पुग्ने रहेको बताए ।
समाजवादी युगतिर नेपाललाई लगेर विश्वभरिका समाजवादीलाई नयाँ सन्देश दिन पनि नयाँ ढंगले पार्टी एकता गरिएको उनले दाबी गरे । सम्बोधनकै क्रममा प्रचण्डले आफुलाई फेरी पनि जंगल जान कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताए । उनले भने “हेर्दै जानुहोला मलाई यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन जंगल जान जनताले साथ दिए सबै त्यागेर फेरि जंगल जान तयार छु।”